Kagi Amashadi - MT4 Izinkomba
Ikhaya MT4 Izinkomba Kagi Amashadi
Yomdabu Japanese ishadi isitayela enikeza inkomba zibukeke ecacile emakethe isiqondiso namandla mkhuba kuwo wonke isikhathi ozimele.
I Kagi Amashadi okufanele avele 70s yekhulu lama-20, at esigabeni sokuqala-Japanese ukuthuthukiswa stock market. I Kagi Amashadi amelela uchungechunge oxhumene imigqa mpo. The ukujiya kanye anyuswe isiqondiso ala imigqa zinqunywa intengo Dynamics. I Kagi Amashadi ungacabangi ngesikhathi.
Uma intengo udlulele luhamba luye ohlangothini olulodwa, umugqa mpo eshadini kuba eside. Uma intengo ujikela nge value pre-echaziwe (Coefficient reverse), umugqa omusha mpo in a ikholomu entsha ngeke badonswe eshadini. I ukushuba Kagi imigqa kushintsha lapho amanani idlule odlule esiphezulu / amagugu abo okungenani.
I Kagi Amashadi waziwa e-USA ngenxa incwadi Steve Nison sika okuthiwa “Beyond zezibani”.
I Kagi Amashadi ezibonisa indlela funa-no-supply amabutho isenzo. A ukulandelana imigqa obukhulu ukhulumela ukuthi ukufuneka ingaphezu ukunikezela (emakethe ikhula).
A ukulandelana imigqa mncane kusho ukuthi supply ngenhla funa (amathonsi emakethe). Yokunikezelana lemigqa ebuhleni nasebubini ukhulumela ukuthi emakethe kuyalingana (ukuthengisela ilingana ukuthi zifune).
Uhlelo oluyisisekelo oluthi isignali ukuhweba kushadi Kagi iyona ukujiya umugqa: Uma umugqa elincanyana iba obukhulu, kufanele uthenge, uma noHezekeli, kufanele ukuthengisa.
A ukulandelana ngobukhulu okwandisa kanye ubuncane ukhulumela amandla ukunyakaza inyuka, nokuncipha ngobukhulu futhi ubuncane ukukhuluma ngoba emakethe ababuthakathaka.
Porog – Goal Coefficient e percents
Kagi Amashadi kuyinto Metatrader 4 (MT4) Inkomba futhi ngokuyisisekelo inkomba forex iwukuba uguqule umlando idatha zanqwabelana.
Kagi Amashadi inikeza ithuba ukuthola izici ezihlukahlukene futhi amaphethini intengo Dynamics ezingasaziwa ezingabonakali ngeso lenyama.
Indlela ukufaka Kagi Charts.mq4?
Kopisha Kagi Charts.mq4 ukuze Metatrader yakho Directory / ochwepheshe / Izinkomba /
Right uchofoze Kagi Charts.mq4
Inkomba Kagi Charts.mq4 itholakala ku Ishadi yakho
Indlela ukususa Kagi Charts.mq4 kusukela Metatrader yakho 4 Ishadi?